Russia yitshe eliyigugu wangempela Altai Territory. Sibhedlela lutho zitholakala ezindaweni esiyingqayizivele yemvelo, okuyinto ecebe kangaka Altai. Eqinisweni, eminyakeni yamuva nje, abantu baye baqaphela ukuthi ingcebo eyinhloko esifundeni - isimo sawo. It has konke: amahlathi, amagquma oluhlaza, izintaba kanye namachibi amaningi. Ngenxa izici bezwe, lapho ungakwazi kahle uphumule hhayi kuphela ehlobo kodwa ebusika, lapho egqumeni jikisa ski resort. Altai Krai zokungcebeleka avame ezindaweni ezifana, ukuze amaholide zingahlangana uphulukisa impilo nge kwezemidlalo.
Ukuphulukisa esifundeni kwabona sezulu kanye emoyeni, okungukuthi, ngisho nje ukuba esifundeni kuhle empilweni. Okwesibili, zonke zokungcebeleka esifundeni BakaJehova banika baphuze lamanzi esiphethu futhi uthathe zokugeza zokwelapha, ngoba lesi Territory ezidumile Altai. Okwesithathu, amamotheli kuvame anemisila yonke impahla edingekayo ukuze kwelashwe izifo ezithize.
Omunye izikhungo edume kakhulu esifundeni kulesi sibhedlela "Russia". Altai esifundeni kanye nesikhungo uqobo ukunikeza izivakashi ukuyeka hhayi kuphela ngenjongo ngcono, kodwa futhi umane uphumule, ubone izindawo ezintsha kanye Ukushushuluza. Lesi sakhiwo esikhulu ilungele ukwamukela izivakashi unyaka wonke.
Qaphela ukuthi indawo inikeza zaziziningi ukuzijabulisa izivakashi zabo. Ngakho, uma wena iyale iliphi igumbi inikeza ukufinyelela pool, isikhungo siphela kahle-isikhungo kanye ikamelo yezingane. Esikhathini izivakashi eziyinkimbinkimbi Ungathola futhi sauna, i rink eqhweni, ski amathrekhi, amabhiliyade kanye bowling. Ngaphezu kwalokho, kukhona njalo aphethwe zokuzijabulisa kokubili ngabantwana nangabantu abadala, futhi ema-disco. Nge ezihlukahlukene okunjalo izivakashi ngokuqinisekile ngeke be bored, ikakhulu uma ufaka ukwelashwa.
Phela, izivakashi manje njalo ngonyaka kuka 100 ayizinkulungwane usivakashele Altay esifundeni. Sibhedlela (amanani ziyashintsha ngezinkathi zonyaka) iyakwamukela holidaymakers.
Indawo endlini ephindwe kabili izobiza izivakashi ruble 2600 ngomuntu ngamunye, futhi ekamelweni elilodwa izobiza ruble 3,800 ngosuku. Kuyinto elula kakhulu ukuthi igama elithi ingachazwa wedwa, ngoba wonke umuntu ithuba ukuchitha kuleli yokungcebeleka sithembele 2 amaviki.
"Russia" sibhedlela inikeza ukwelashwa ephulukisa amanzi, kanye spa ngentuthuko yakamuva emkhakheni nokuvuselelwa kanye nokwelashwa.
ongakhetha Abaningi ezokungcebeleka ahlinzekwa Altay, zokungcebeleka ingatholakala lapha yonke ukunambitheka kanye nesabelomali. Sibhedlela "Belokurikha" - omunye edume kakhulu esifundeni, kwabonakala khona phakathi kuqala.
Yezefundo ezikhethekile ekwelapheni izifo sezinzwa, senhliziyo, endocrine kokudla, kanye nokusiza abantu abanezifo we esikhumbeni, ethanjeni kwemisipha izicubu.
Famous for amanzi awo amaminerali we-Altai Territory. Sanatoriums, kuhlanganise "Belokurikha" Basekela imithi yabo endaweni yokuqala kubo, enquma iziguli udaka zokugeza, izindlu zokugeza amaminerali kanye namanzi okuphuza. Ukusungulwa kanye ifakwe imishini yesimanje ezivumela umthelela eziyinkimbinkimbi emzimbeni.
Qaphela ukuthi le misebenzi ehhotela kanye uhlelo ocebile zamasiko ukuzijabulisa okuyinto ngeke be bored ngesikhathi ukwelashwa. Ngakho, ke iqasha cinema ehholo, lapho ungakwazi ukulalela umculo. Impilo resort inikeza hambo lokuya zemvelo yezemidlalo "Compound laseSiberia". Ngaphezu kwalokho, ukusebenza insimu yalo akuyona nje swimming pool kanye epaki amanzi.
amanani eseholidini e-isikhungo zazisuka ruble 3850 ngosuku umuntu ngamunye, izindleko hambo luqala ruble 53 900.
Hhayi kuphela ngenxa yokuba yokungcebeleka "Belokurikha" iyona Altai Territory. zokungcebeleka Impilo zitholakala kuso sonke isifunda. "Pine Ihlathi", njengoba leli gama lisikisela, inikeza ukuphumula kahle izindawo emahlathini coniferous. Itholakala kwi osebeni olunothile River Cheremshanka.
The yokungcebeleka linikeza zokwelapha abantu abanezifo of the system zemisipha, senhliziyo, wethukile futhi izinhlelo zokuphefumula. Njengoba izinqubo zokwelapha futhi isebenzisa amadivayisi amaningi, zonke zdravnitsa inikeza izindlela ezahlukene phezu 40.
Njengoba i-ukuzijabulisa inikeza ejimini, sauna, ikamelo umusi, enkundleni yomdlalo webhola, Karaoke disco, kanye nomfula ichibi lokwenziwa.
ngoba impatho Amanani aqala ruble 2260 ngosuku umuntu ngamunye. Esikhathini inani lifaka phakathi umnyuziki 4-Yebo ukudla.
Sibhedlela "Rodnik Altai"
Lokhu ukusungulwa itholakala endaweni ehlathini, kude msindo wokuxokozela emzini, kodwa kukhona ngeke be bored. Ukuze ukwelashwa e esibhedlela kuyoba usizo ubani izinkinga umgudu wokuphefumula, senhliziyo, genitourinary, endocrine, isimiso sezinzwa, futhi izifo zesikhumba iphathwa izinkinga ithambo izicubu. Odokotela ukunikela ukwelashwa okukhethekile izingane nokusiza nezifo emsebenzini. It uphakamisa eyinkimbinkimbi zokugeza kanye zokwelapha, kuhlanganise ukusetshenziswa kwamadivaysi yesimanje.
Ukuze izivakashi resort awazange unesizungu, inikeza ezihlukahlukene amasevisi, kuhlanganise ezihlukahlukene ezemidlalo, ehholo, okuyinto elibamba izenzakalo, izinhlelo zezingane, kanye ehlobo pool ongaphandle.
Amanani ukwelashwa e amamotheli uqale ruble 3150 ngelanga, izindleko kuncike ekamelweni. Lesakhiwo elinikeza izaphulelo zonyaka kanye iholide, futhi izigaba ethile yezakhamuzi.
Kuhle okunye e esibhedlela
Altai esifundeni eshiya ukubuyekezwa omuhle kakhulu, kanye izivakashi ezivela kwezinye izifunda. Nokho, ezinye zezivakashi Ngaletinye tikhatsi, tivela izimangalo.
Empeleni ukuhlala esibhedlela Altai Krai ( "Russia" noma yimuphi omunye) ngokuphelele like izivakashi, ikakhulukazi ukudla. Mayelana bamnakekele futhi bamelaphe njengoba ebhalwe amagama amaningi uyababazeka. Yiqiniso, zikhona izikhalo, ezifana omakhelwane ezinomsindo noma ukuhambisana okusemthethweni.
Sibhedlela "Belokurikha" eshiya ngididekile phakathi izivakashi. Ngokwesibonelo, abanye bajabule ngokuphelele yonke into kusuka isevisi ziphethe ukuphathwa, kanye nezinye izivakashi uqaphele ukuntuleka ukulungisa, indawo encane egumbini kanye izinga abampofu yokuhlanza.
Uphenyo kulesi sibhedlela "Pinery" futhi uyisithelo esiyisimanga. Othile eseholidini e injabulo okugcwele ubonge abasebenzi, kanti abanye kunalokho Ziningi izimangalo. Sibhedlela asakhelwanga izingane, akukho igumbi kwengane.
"Altai Spring" eshiya ngokwayo ejabulisayo jikelele, kodwa ezinye izivakashi singawanaki amaphutha emsebenzini izikhungo iqembu.
Kangakanani-hepatitis C kwa-Israyeli?
"Mashuk" - sibhedlela (Pyatigorsk): incazelo, izici, ukubuyekezwa
Impilo resort oLwandle Azov: uhlu engcono. Phumula futhi ukwelashwa oLwandle Azov
"Svityaz" indawo yokungcebeleka Grodno esifundeni (Belarus): iphrofayli yezokwelapha, indawo yokuhlala, ukudla, imithi yokwelapha
Proper Ekupholiseni izinqumo ze ezindlini
Ukukhuthazwa nge-ovulation: ukubuyekezwa, ukufundwa, ikakhulukazi izinqubo
Wall ukwahlukanisa kusukela ngaphandle
Yini kuvamile isakhiwo elula ngokubona izazi zezinto eziphilayo
Ubhanana Baking: amakhekhe, amakhekhe, ophaya